"Olee nke" Na-arụ Ọrụ Kachasị Mma Iji Mechie? | Martech Zone
“Olee nke” Na-arụ Ọrụ Kasị Mma Imechi Ndị Na-eduga?
M na-agụ na ihe ụlọ ọrụ forum ebe a esenowo jụrụ “Kedu” onye ọrụ na-arụ ọrụ kasị mma imechi a ụzọ na-adịghị emechi ozugbo. Nke ahụ bụ ajụjụ pụrụ iche nyere na enwere ọtụtụ mgbanwe na-arụ ọrụ. Gịnị bụ ụlọ ọrụ ahụ? Uru nkwekọrịta ahụ? Ọnọdụ mmadụ ma ọ bụ firmographics nke ụlọ ọrụ ahụ na-aga n'ihu? Hà nọ n'ọhịa ebe atụmanya dị na ntanetị? Ọ bụ azụmahịa mpaghara ka ọ bụ azụmaahịa mba?
Kedu ka ị ga - esi chọpụta isi rue isi nyocha n'etiti ndị na - ajụ ase? Edere mgbasa ozi ọchụchọ akwụ ụgwọ dị iche iche karịa, dịka ọmụmaatụ, aha peeji na nkọwapụta meta. Ndi kiet ọfọn akan enye eken? Won't gaghị ama ruo mgbe ịnwale nke ọ bụla n'uju maka mkpọsa ị na-eme. Nke ahụ na-ewe obere ule.
Nakwa, 1 + 1 na-agbachitere 3 ma ọ bụ karịa mgbe a bịara n'ihe banyere ndị na-ajụ ase. Nwere ike ịchọrọ ịme mgbasa ozi Facebook nke na-eduga na ntanetị, nke na-eme ka ndị ọrụ pịa pịa oku na-eme ma debanye aha email. Mgbe ahụ… ị nwere ike ịpị mkpọsa ọnwa 6 na atụmanya ma nweta oke nzaghachi ọnwa 3 ka emechara. “Kedu” onye ozo rụrụ ọrụ ebe a?
Ndị na-azụ ahịa na atụmanya achụmnta ego nwekwara iche iche nzube mgbe ị na-eri ụdị ọkara ọ bụla. Dịka ọmụmaatụ, post blọọgụ achọtara na nyocha ederede, nwere ike ịme ka ịmata atụmanya ma mee ka ha debanye aha ma ọ bụ budata akwụkwọ akụkọ. Mana, ebumnuche ha nwere ike ọ gaghị abụ ịzụrụ… naanị ile anya. Ọ bụ ya mere o ji dị mkpa ijide ozi ha na ọdịnaya ha oge. Ọ bụkwa nnukwu echiche iji jikọta ha site na mgbasa ozi mmekọrịta. Mgbe ha na- dị njikere ịzụta… ị ga-abụ onye isi.
Anyị na-emejuputa mmejuputa ahia nke ndị ahịa niile. Mgbe ụfọdụ anyị na-arụ ngwa na-eme ka uche na ikike dịrị times oge ndị ọzọ anyị nwedịrị ike igosi ha mgbasa ozi ọdịnala dịka ozi ederede. Ihe anyị na-arụsi ọrụ ike bụ ịhụ na anyị anaghị afụ ego na otu usoro, anyị na-anwa ị nweta ndị na-ajụ ase na-akwado ibe ha.
Ekewara atụmatụ gị nke ọma n'etiti ndị na-ajụ ase a niile - ekwentị mkpanaaka, vidiyo, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ọchụchọ, ọdịnala, ọdịdị ala, email, ịde blọgụ, mgbasa ozi akwụ ụgwọ, nkwado, mgbasa ozi, akwụkwọ akụkọ, wdg. Kama ịhọrọ ibe gị, bido na otu ebe ị nweela ahụmịhe, mụta ya, wee bido itinye ya otu ọkara n'otu oge.
Kedụ ka Ahịa Mgbasa Ahịa Na-ere Mgbasa?
Zere Storelọ Ahịa Ngwa na "Tinye na Ihuenyo mbu"